मात्र मोबाइल Alubase, तपाइँको डेस्कटप को लागी वायरलेस चार्जर आईफोन समाचार
केवल मोबाइल Alubase, तपाईंको डेस्कटपको लागि वायरलेस चार्जर
त्यहाँ वायरलेस चार्जरहरू धेरै छन्, सयौं तिनीहरू मध्ये र सबै सम्भावित मूल्यहरूको। तर यदि हामी सँग एक वायरलेस चार्जर चाहानुहुन्छ भने हाम्रो डेस्कमा कुनै पनि सुविधायुक्त ठाउँमा राख्न योग्यको डिजाइन, चीज परिवर्तन हुन्छ र ती केहि कम हुन्छन्। र सुविधाहरूको त्यो सूचीमा निस्सन्देह जस्ट मोबाईलको अल्युबेस आधार छ।
एल्यूमीनियमले बनेको छ, आईफोनको चार्ज चार्जसँग उपयुक्त छ, थोरै समस्या बिना अधिकतम विश्वसनीय र वायरलेस बक्सको साथ नयाँ एयरपड चार्ज गर्न सक्षम, यो बस मोबाइल वायरलेस चार्ज डक तपाईंको iMac वा म्याकबुकको छेउमा उत्तम छ। हामी तपाईंलाई तल हाम्रो प्रभावहरूको साथमा सबै विवरणहरू दिन्छौं।
1 शीर्ष गुणवत्ता र डिजाइन
जब हामी वायरलेस चार्जिंगको बारेमा कुरा गर्छौं, त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले थोरै प्रस्ताव गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्दछन् जुन तपाईंलाई बाँकी भन्दा फरक बनाउँछ। वास्तविकताबाट अरु केहि छैन। यो सत्य हो जस्तो देखिन्छ कि कुनै पनि आधारले तपाईंको लागि "ट्रिक" गर्न सक्दछ, सस्तो पनि तपाईले अमेजन वा एलिसप्रेसमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर सुरक्षा र विश्वसनीयता दुई गुणहरू हुन् जुन उनीहरूले दिंदैनन्, र ती सस्ता आधारहरू मध्ये धेरैले न्यूनतम आवश्यकताहरू पूरा गर्दैनन् जुन यस प्रकारको उपकरणको बारेमा सोधिनु पर्छ। एक वायरलेस चार्जिंग बेसले तातो नहुनु पर्छ ताकि तपाईको आईफोनको ब्याट्री बिग्रिनु पर्दैन, र चार्जिंग सतह पर्याप्त ठूलो हुनुपर्दछ। ताकि तपाई मिलिमिट्रिकली मापन गर्नुपर्दैन जहाँ तपाई आफ्नो फोन राख्नुहुन्छ। यी समस्याहरू यो बस मोबाइल बेसको साथ अवस्थित छैन।
यी आवश्यकताहरूको लागि हामीले प्रयोग गरिएको सामग्रीको डिजाइन र गुण पनि थप्नु पर्छ। हामीले पहिले नै भनेजस्तै, सबै अड्डाहरू कहिँ पनि राख्न सकिदैन, तपाई अल्युबेससँग नहुने समस्या हो, किनकि तपाईले राख्नु भएको ठाउँमा राख्नु यसको वरपरको टुक्रिने छैन। मेरो केसमा, एल्युमिनियम र कालो र color पूर्ण रूपमा मेरो iMac सँग मेरो कार्य डेस्कको शीर्षमा मेल खान्छ। त्यहाँ मसँग मेरो आईफोन रिचार्ज गर्न हातमा छ जब म कम्प्यूटर, वा मेरो एयरपडहरूसँग छु। आईफोनको द्रुत चार्ज (.7,5.W डब्ल्यू) को साथ संगत हुनुको साथै, यो सामसु theको द्रुत चार्ज (१०W) सँग उपयुक्त छ।.
आधारमा एक एल्युमिनियम बाहिरी औंठी छ, समान रंग र चाँदीको खैरोमा आईम्याकको रूपमा समाप्त। भित्री भाग सिलिकॉन रिंगको साथ कालो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ जसले सेवा गर्दछ ताकि तपाईंको आईफोनको पछाडि स्क्र्याच हुँदैन जब यो आधारको सम्पर्कमा आउँदछ, नन-स्लिप हुनुको साथै आईफोन स्लिप हुँदैन र त्यसबाट सर्छ। स्थिति जुन तपाईंले यसलाई छोड्नुभयो, केहि चीज जुन अन्य आधारहरूसँग हुन्छ र आईफोनलाई रिचार्ज नगर्न कारण गर्दछ। यो आईफोन केसहरूमा उपयुक्त छ, ओटेरबक्स डिफेन्डर सहित, एक वास्तविक ट्या tank्की.
Just मोबाइल ब्रान्डले हामीलाई राम्रोसँग समाप्त भएको, साधारण सामानहरूसँग अभ्यस्त बनाएको छ जुन एप्पल उत्पादनहरूको साथ पूर्ण रूपमा मिल्दछ। Alubase वायरलेस चार्ज आधार अपवाद छैन, र तपाईको म्याकको छेउमा राख्नको लागि बेस बेस हो, वा यदि तपाईले यसलाई घरको कुनै पनि अन्य ठाउँमा प्राथमिकता दिनुहुन्छ र यसको प्रथम श्रेणी सामग्री र समाप्तिको लागि धन्यवाद छ। बत्तीहरू छैन, कुनै गारिश लोगोहरू बिना, जेएम (बस मोबाइल) ब्रान्ड एल्युमिनियम रिंगमा मुश्किलले देख्न सकिन्छ। तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोन कहाँ राख्नुहुन्छ गणना गर्नुपर्दैन, वा रिचार्ज गर्दा अत्यधिक तातोको चिन्ता लिनुपर्दैन, तपाईं यसलाई एयरपड्स वायरलेस चार्जिंग बक्सको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सबै क्षैतिज आधारहरू जस्तै, यसमा रिचार्ज हुँदा तपाईंको आईफोन देख्न नसक्ने दोष छ। यसको मूल्य Amazon 54 अमेजनमा छ (लिङ्क) हो, यसले पर्खाल चार्जर समावेश गर्दैन। यो सस्तो विकल्प तपाईले बजारमा फेला पार्न सक्नुहुन्न, तर यो सबैभन्दा आकर्षक र भरपर्दो हो।
Alubase वायरलेस आधार
शीर्ष डिजाइन र सामग्री
अति तापीएको बिना
गैर पर्ची सतह
यसको मूल्यको बाबजूद पर्खाल चार्जर समावेश गर्दैन
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » आईफोन सहायक उपकरणहरू » केवल मोबाइल Alubase, तपाईंको डेस्कटपको लागि वायरलेस चार्जर
आईप्याडको अर्को जेनरेशनको एक OLED स्क्रिन हुनेछ